Madaxweyne Trump Oo Qaadacay Xaflad Sanadeedka Weriyeyaasha Aqalka Cad – Goobjoog News
Madaxweyne Trump Oo Qaadacay Xaflad Sanadeedka Weriyeyaasha Aqalka Cad
Madaxweynaha dalka Marykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan ka qeyb galeyn xafladda casho sanadeedka taasi oo ay qabsanayaan weriyeyaasha aqalka cad, waxaana la qaban doonaa xafladdaan 29 bisha Abril ee soo socota.
Xafladdaan ayaa waxay tahay mid aad soo jiidasho u leh waxaana ka soo qeyb gala siyaasiyiin, weriyeyaal iyo dad caan ah.
Xafladda waxaa dadka la hadla oo ka soo qeybgala madaxweynaha Mareykanka oo markaas talada waddanka haya.
Hadalkaan ka soo baxay madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu imaanayaa maalin ka dib markii la shaaciyay in hay’ado warbaahineed oo ay ku jiraan BBC iyo Telefishinka CNNka laga mamnuucay inay ka qeyb galaan shirarka warbaahinta uu qabto Afhayeenka madaxweynaha Maraykanka.
Madaxweyne Donald Trump ayaa warbaahinta inta badan waxa uu u soo jeediyay dhaliilo , isagoo sheegay inay baahiyaan warar been abuur ah oo xaqiiqda ka fog waxa uuna ugu yeeray warbaahinta baahisa warar been abuur ah inay tahay cadowga shacabka Mareykanka.
Xaflad sanadeedka weriyayaasha aqalka cad ayaa waxaa la dhigayay muddo ku dhaw boqol sano iyadoo soo bilaabatay sanadka markuu ahaa 1924tii waxaana ka soo qeyb gali jiray madaxweynaha markaas xilka haya isagoo ka jeediya khudbad .
Madaxweynihii hore ee dalka maraykanka Obama ayaa intuu xilka hayay ka qeyb galay marar badan waxa uuna ka jeedin jiray khudbado.
Wasiirka Beeraha Soomaaliya Oo Kulan Caalamiya Ah Kaga Qeyb Galayo Dalka Rwanda
Qftftt rvnvea Buy generic viagra cialis 20mg price
Nikbvu pnrqtw Order viagra us when will cialis be generic
Dvvlnd ndyysr generic viagra online online canadian pharmacy
Mngqod vwtthu canada pharmacy Eqxdz
cialis liquid for sale where can i buy cialis in canada wher...
viagra next day delivery without prescription cvs viagra buy...
low dose cialis do you need prescription for cialis comprar...
cialis 10mg vs 20mg Primaquine cialis [url=https://xz-pharma...
cialis cheep selling cialis in us cialis costco [url=http://...